रातिको समयमा गर्न नहुने गल्तिहरु , थाहा पाइराखौं – Reporters7.com | Nepal's News Portal | Online News Portal from Nepal
Home /रातिको समयमा गर्न नहुने गल्तिहरु , थाहा पाइराखौं
हामीले जानेर नजानेर कहिलेकाहिँ अनेकन गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ । तिनै गल्तीहरुमध्ये एक हो – रातको समयमा गरिने केहि असामान्य व्यवहार । के हुन् त त्यस्ता आनीबानी र व्यवहार ? जसका कारण हामीलाई उन्नतीमा बाधा आईलाग्छ ?
पेट थिचेर सुत्ने बानी :
तपाई कस्तो पोजिसनमा सुत्नुहुन्छ ? सुत्ने पोजिसनका कारण पनि तपाईको शरीरमा अनेकन बाधा व्यबधान आईलाग्न सक्छ । पेट थिचेर सुत्दा तपाईको श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्छ। त्यस्तै बिजुली चम्कीरको बखत उत्तानो परेर सुत्नु हुँदैन । यस्तो बेला बरु बेलाबेला यताउता फर्केर कोल्टे फर्केर सुत्नुपर्छ । यदी घोप्टो परेर सुत्नुभयो भने तपाईको शरीरका अंगहरुमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ र कार्य संचालनमा बाधा पुग्छ। यही कारण अन्य शारीरिक समस्यासँगै अनुहारको चमक पनि हराउँछ।
सिरानी वा ओच्छ्यान फोहोर हुनु :
तपाईले प्रयोग गर्नुभएको सिरानी फोहोर छ भने त्यसले तपाईको अनुहारको चमक र सिंगो शरीरमा रोगको शिकार गराइरहेको हुनसक्छ । सुत्नका लागि रेशमको सिरानी सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ । त्यसैले ओढ्ने ओच्छ्याउने एकदमै सफा राख्नुपर्छ । वास्तुका अनुसार सुत्ने कोठा फोहोर भएमा तपाईको उन्नतीमा बाधा सिर्जना हुन्छ ।
सुत्नुअघि फोनको प्रयोग :
के तपाई ओछ्यानमा पल्टेर मोबाईल फोनमा झुण्डिएर बस्नुहुन्छ ? यदी यसो गर्नुहुन्छ भने यसका कारण तपाईको निन्द्रा खलबल्याउने त छँदैछ, अनुहारको चमक पनि हराइदिन्छ । आँखासम्बन्धि समस्या देखि प्रविधीको अनावश्यक प्रयोगका कारण घरमा कलह पनि उत्पन्न हुन्छ । अर्कोतिर मोबाईलबाट आउने प्रकाशको सोझो असरले अनुहारको छालामा हानी पुर्‍याउँने कारण यो बानी आजैबाट त्याग्नुहोस् ।
कपाल फिँजाएर सुत्ने :
यदी राती सुत्दा कपाल खोलेर फिजाउँने बानी छ भने त्यसले कपालमा लट्टा पर्ने, झर्ने, टुक्रिने लगायता समस्याका साथै अनुहारको छालामा समेत असर गर्छ । खासगरी कपालमा लगाइएको तेल एवंम् क्रिमले अनुहारको छालाको रोमछिद्र बन्द गर्न सक्छ। त्यसैले कपाल फिँजाएर सुत्ने बानी त्याग्नुहोस् ।
घुँडा खप्टेर वा चढाएर सुत्ने बानी : घुँडा खप्टेर वा चढाएर सुत्ने बानीका कारण घुँडा दुख्ने समस्या र रक्तसञ्चारमा समस्या आउन सक्छ । बरु खुट्टाको बिचमा तकिया राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ । रातको समयमा होओस् वा दिउँसो शरीरमा रक्तसञ्चारका लागि खुट्टाको पोजीसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ।
ओछ्यानमा बसेर पढ्ने, काम गर्ने बानी : यदी तपाईको यस्तो बानी छ भने आजै त्याग्नुहोस् । यस्तो बानीका कारण तपाईलाई रातमा मज्जाको निन्द्रा नपर्न सक्छ । एजेन्सी
नेपालमा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती गर्न…